Coral Reef: အနီရောင်ပုံပြင်
သက်ဝေ said on September 5, 2014 at 3:01 PM
ဇွန်ရေးထာလေးဖတ်ပြီး ကိုယ်နှစ်သက်မိတဲ့ အရောင်၊ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေရဲ့ အရောင်တွေနဲ့ သူတို့လေးတွေရဲ့ အကြောင်းကို စဉ်းစားမိသွားတယ်...
ချစ်စရာ ပိုစ့်လေးအတွက် ကျေးဇူး ဇွန်...
Ma Tint said on September 5, 2014 at 3:10 PM
အရောင်အသွေးကင်းမဲ့ပြီး ရိုးစင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ်ဖတ်ခွင့်ရလို့ ၀မ်းသာကျေးဇူးတင်တယ် ဇွန်လေးရေ။ မအားလပ်တဲ့ကြားက ပုံမှန် ဘလော့ဂင်းနိုင်တာ ချီးကျူးပါရဲ့ .. ခရီးကပြန်လာရင် ထပ်ဆုံမယ်...
ညိုလေးနေ said on September 5, 2014 at 4:37 PM
ဓါးလေးကို တသသလုပ်ရင်း ရှလို့ သွေးနီနီ တွေ ထွက်လာဦးမယ်လို့ ... :P
tin min htet said on September 6, 2014 at 7:44 AM
Red salute :)
မိုးညချမ်း said on September 6, 2014 at 12:53 PM
အဲ​ကောင်​မ​လေးနဲ့ မိုးညက​တော့ ဆန့်​ကျင်​ဖက်​​ပေါ့ ... မိုးညက​တော့ အနီဆိုသိပ်​ကြိုက်​ :)
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) said on September 6, 2014 at 9:17 PM
မကြိုက်တတ်သေးလုို့ မကြိုက်သေးတာပါ။ ကြိုက်သွားပြီ အရောင်မရွေးတော့ပါဘူး။ ဒါက သဘာဝပါ။ အခုဆုို မကြိုက်တဲ့ အနီရောင်လေးက အကြိုက်ဆုံး ဖြစ်သွားပြီ မဟုတ်လား။း)
ဇွန်မိုးစက် said on September 6, 2014 at 11:43 PM
စိတ်ကူးထဲမှာရှိနေတဲ့ အနီရောင်အကြောင်းလေးကို ရေးဖြစ်သွားအောင် သတိတရနဲ့ ချဲလင့်လုပ်တဲ့ အစ်မသက်ဝေကို ဇွန်က ကျေးဇူးတင်ရမှာ။း)
တီတင့်ရေ... ချဲလင့်ဆိုတော့လည်း မအားတဲ့ကြားကပဲ ရေးပစ်လိုက်တာပေါ့။ ဘာရမလဲ.... ဟဲ..ဟဲ...။ ဒီတစ်ခါ ဆုံဖို့ မျှော်နေတယ်နော်။း)
ညိုလေးရေ... ခုထက်ထိတော့ ကောင်မလေးက ဓားမရှသေးပါဘူးပါကွယ်။ ခေါက်ဓားနီလေးထဲပါတဲ့ ပစ္စည်းပေါင်း ၁၆ခု ရှိတဲ့အထဲက အများဆုံးသုံးဖြစ်တာ ကတ်ကြေးနဲ့ဇာဂနာဆိုတော့လေ...။ :D
Yes, you got it bro Tin Min Htet. I should name the post title as 'Red Salute'. ;)
ဟော...ပျောက်နေတဲ့ ညီမလေး မိုးညက အနီရောင်ပုံပြင်ကြောင့် ပြန်ပေါ်လာပြီ။း)
အဲလိုလည်း မဟုတ်သေးဘူး... အစ်ကို ကိုကိုမောင်ရဲ့။ ကောင်မလေးက အနီရောင်ရှိတဲ့ ပစ္စည်းလေးကိုသာ နှစ်သက်တာ၊ အနီရောင်ကိုတော့ သူမကြိုက်သေးဘူးတဲ့။း)
Sonata Cantata said on September 7, 2014 at 11:28 AM
တို့များကတော့ မူလတန်းအရွယ်တုန်းက အနီရောင်ကို အကြိုက်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အခုတော့ ကောင်မလေးလိုပဲ အနီရောင်ကို မကြိုက်ဘူး။
ရွှေအိမ်စည်မေ said on September 8, 2014 at 12:46 AM
အနီရောင်ပစ္စည်းလေးတွေ လာကြည့်သွားတယ် :))
စံပယ်ချို said on September 8, 2014 at 6:57 PM
ညီလင်းသစ် said on September 9, 2014 at 6:13 AM
မသီတာလိုပဲ ပြောမယ်၊ မူလတန်းတုန်းက အနီရောင်ကို စွေးစွေးနီအောင် ကြိုက်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ခုကော ကြိုက်သေးလားလို့ မေးရင်တော့ မဖြေတတ်မှာ သေချာတယ်…၊း)
အင်း.. ဘာအရောင်ရယ်လို့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် မပြောနိုင်တဲ့ သံယောဇဉ်မိုးက ပက်ဖြန်းဆေးကြောလိုက်ရင် မကြိုက်တဲ့ အရောင်တွေလည်း တခါထဲ ကွာကျသွားတော့တာပဲ-လို့ တွေးနေမိတယ် ဇွန်ရေ…။း))
ဇွန်မိုးစက် said on September 9, 2014 at 2:08 PM
ဒီလိုဆို... မမသီတာကို လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါ အနီရောင်ကို ရှောင်ပြီးပေးမယ်နော်။း)
သူသူ... အနီရောင်ပစ္စည်းလေးတွေ မတွေ့ဘဲ အနီရောင်စာလုံးတွေပဲ မြင်သွားတယ် ထင်တယ်။ :P
ကျေးဇူးပါ မဂျက်ရေ။ မဂျက်ဆီကို ဇွန် အလည်လာဖို့ အကြွေးတင်နေသေးတယ်။း)
အဟား... အစ်ကိုညီလင်း ပြောသွားတဲ့ ရှုထောင့်က တစ်ခါမှ မစဉ်းစားခဲ့မိဘူး။ ဟုတ်တယ်နော်... အရောင်မရှိတဲ့ သံယောဇဉ်မိုးကြောင့် မနှစ်သက်တဲ့အရောင်တွေတောင် ကွာကျသွားနိုင်တယ်ဆိုတာ...။း))
မဒမ်ကိုး said on September 9, 2014 at 2:59 PM
ခရမ်းတွေချည်းဘဲ စိတ်နှစ်ဆထင်တာဘဲ :P
မိုးငွေ့........ said on September 19, 2014 at 9:31 AM
ဇွန်ရေးတဲ့အနီရောင်ခေါက်ဓါးလေးကိုဖတ်ပြီး ကိုညီလင်းလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ဆွိဇ်ခေါက်ဓါးလေးကို အမှတ်ရပြီးထုတ်ကြည့်မိသွားတယ် ကိုယ်လည်းအဲဓါးလေးကို အိတ်ထဲဆောင်လေ့ရှိတယ်..တနေရာမဟုတ်တနေရာတော့ အသုံးဝင်တယ်မဟုတ်လား..း) အက်ဆေးလေးလှတယ်..